'एनआरएनए'को चुनाब आज, एक घण्टाभित्र नतिजा | Kendrabindu Nepal Online News
२९ आश्विन २०७६, बुधबार १०:१४
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज (बुधबार) चुनाव हुँदै छ।
काठमाडौंस्थित हायात होटलमा मंगलबारबाट शुरु भएको नवौं विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत ४२ पदका लागि मतदान हुने भएको हो। त्यसका लागि मनोनय दर्ता मध्याह्न १२ बजेसम्मका लागि खुला गरिएको छ ।
आज साँझ ५ बजे देखि राति १० सम्म हुने विद्युतीय मतदानको एक घण्टाभित्रै नतिजा सार्वजनिक हुने बताइएको छ । विश्वका ८१ देशमा एनआरएनएका सदस्य ८२ हजारको संख्यामा रहेको बताइएको छ। ती देशबाट बढीमा २५ सय प्रतिनिधिले मतदानमा भाग लिने अनुमान गरिएको छ। सम्मेलन बिहीबार सकिनेछ ।
को हुन् कुमार पन्त र कुल आचार्य ?
अध्यक्षका प्रत्यासी कुमार पन्त र कुल आचार्य वर्तमान उपाध्यक्षहरू हुन्। आचार्य पश्चिम नेपाल पर्वतका हुन् भने पन्त गोर्खाका हुन् । पन्त सत्तारुढ नेकपा निकट हुन् भने आचार्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निकट हुन्।
आचार्यको बेलायत तथा पोर्चुगलमा रेष्टुराको व्यवसाय चलाइरहेका छन् भने पन्तले जर्मनीको फ्रैंकफर्टमा टल तथा रेष्टुरा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले पन्तलाई अप्रत्यक्षरूपमा समर्थन गरिरहेका छन् भने दुई कार्यकाल अध्यक्ष बनेका अर्बपति शेष घलेले आचार्यलाई समर्थन गरिरहेका छन् ।
पन्त प्यानलमा को को ?
पन्त प्यानलबाट ५ उपाध्यक्षका लागि डा. बद्री केसी (रसिया), हिक्मत थापा (अफ्रिका), सोनाम लामा (अमेरिका), अर्जुनकुमार श्रेष्ठ (बेल्जियम) र धर्मराज अधिकारी (अस्ट्रलिया) उम्मेदवार बन्ने भएका छन्। महिला उपाध्यक्षमा सपिलाराज भण्डारीले उम्मेदवारी दिने भएकी छन्।
यस्तै महासचिवमा बेलायत निवासी प्राध्यापक डा. हेमराज शर्मालाई उम्मेदवार बनाउने पन्त समूहको तयारी छ।सचिवमा अमेरिका निवासी गौरी जोशीबारे निर्णय गरेको भए पनि शिवकुमार बरुवाल (बेल्जियम) र मध्यपूर्वका राजेन्द्र कुमार शर्मा (आरके) मध्ये एकलाई उम्मेदवार बनाउने पन्त समूहले छलफल गरिरहेको छ।
यसैगरी पन्त समूहबाट कोषाध्यक्षमा जापानका महेशकुमार श्रेष्ठले उमेद्वारी घोषणा गरेका छन् भने सह-कोषाध्यक्षमा लोकप्रसाद दाहाल (बेल्जियम), गोविन्दप्रसाद गौतम (रसिया) र एसी शेर्पा (अमेरिका)ले दाबी गरेका छन् ।
आचार्य प्यानलमा को को ?
कांग्रेस निकट ठानिने कुल आचार्यको प्यानलमा पाँच उपाध्यक्षका लागि डा. केशव पौडेल (अमेरिका), मन केसी (अस्ट्रेलिया), नरेन्द्र भाट (मध्यपूर्व) र रविना थापा (अमेरिका)लाई उम्मेदवार बनाउने तयारी छ । यस्तै महासचिवमा बेल्जियम निवासी व्यवसायी जानकी गुरुङ, कोषाध्यक्षमा सोम सापकोटाले उम्मेदवारी दिने भएका छन् ।
Prevनेकपा बैठकको एजेण्डा: मन्त्रिमण्डल फेरबदलदेखि सभामुख चयनसम्म
गोविन्द केसीविरुद्ध अनसन बस्ने विजय थापा पक्राउNext